निर्वस्त्र भएर काम गर्ने महिलाहरुका लागि मात्रै जागिर ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
निर्वस्त्र भएर काम गर्ने महिलाहरुका लागि मात्रै जागिर !
लण्डनको एक कम्पनीले आश्चर्यजनक विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । प्रकृतिवाद तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवा दिने बेलायतको कम्पनी नेचुरिष्ट क्लिनर्सले प्रकाशित गरेको उक्त विज्ञापनमा निर्वस्त्र काम गर्ने महिलाले मात्र आवेदन दिन भनिएको छ ।
जो निर्वस्त्र भएर निजी घरहरूको सरसफाइ गर्न इच्छुक छन त्यस्ता महिलाबाट आवेदन माग गरिएको छ । सर–सफाइको कामका बेला ती महिला कामदारहरूले चप्पल र पञ्जा मात्र लगाउन पाउने नियममा उल्लेख छ ।सबै उमेर र साइजका महिलाहरूले दरखास्त हाल्न पाउने कम्पनीले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । जागिरमा छनोट हुनेले घण्टाको ६ हजार रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन् ।‘विज्ञापनमा भनिएको छ ‘महिला प्राकृतिक सरसफाइकर्ताको खोजीमा छौँ, जसले निर्वस्त्र भएर निजी घरहरूको सफाइ गर्नेछन्’ ।
कम्पनीले निर्वस्त्रवादलाई समर्थन गर्ने न्यूडिस्ट कम्युनिटीका सदस्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिनेछ । त्यस्ता कामदारहरूलाई छुन भने नपाउने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ ।हाल कम्पनीले तीन प्रकारका सेवा दिँदै आएको छ । एउटामा कामदार निर्वस्त्र हुन्छन् । अर्कोमा घरधनी निर्वस्त्र हुन्छन् । अर्कोमा दुबै नै निर्वस्त्र हुन्छन् ।यो कम्पनी दुई वर्ष पहिले स्थापित भएको हो । अहिले लन्डन बाहिर पनि सेवा प्रवाह गर्न थालिसकेको छ ।